Wholesale yevakadzi Vakasarudzika bhegi, chiJapanese uye chiKorea chimiro chevakadzi chisina kujairika bhegi, revakadzi satchel, Commuter bhegi, zvizorwa bhegi vagadziri uye vanotengesa - Dongguan Yihua Handbag Co., Ltd
Kuchengetedza bhegi rekuzora
Kambani yedu yakanyoreswa Dongguan Tianqin Packaging Zvigadzirwa Co, Ltd. muna 2010, iyo inonyanya kuburitsa marudzi ese ekuputira zvigadzirwa; muna 2020, tichavandudza bhizimusi rehomwe uye tinogadza Dongguan Yihua Handbag Co, Ltd. kuburitsa zvigadzirwa zvakasiyana zvekusona; inogona kuverengerwa zvinoenderana nezvinodiwa Zviratidzo uye kugadzirwa kwemabhegi akasiyanasiyana, mabhegi ekuzora, mabhegi echishandiso, masaga evarume nevakadzi, mabhegi ezororo, nezvimwe; nemhando yepamusoro, zvigadzirwa zvinonyanya kuendeswa kuEurope, America, Japan, Korea nedzimwe nzvimbo.Iyo fekitori iri muzinda wepasi rose wekugadzira-Dongguan. Iyo fekitori ine mhando dzese dzekugadzira michina. Iyo inopa imwechete-yekumira sevhisi kubva kwekutanga sampuro dhizaini uye proofing kusvika yepakati-temu kutenga uye kugadzirwa kune yakazopedzwa zvigadzirwa kutumirwa.